MCSA နဲ့​ MCSE ဘာ​ကိုေ​ရွး​မည်န​ည်း - Myanmar Network
MCSA နဲ့​ MCSE ဘာ​ကိုေ​ရွး​မည်န​ည်း
Posted by Tin Nyunt on July 1, 2011 at 11:21
MCSA ဆို​တာ Microsoft Certified Systems Administrator ကိုြေ​ပာ​တာ။
MCSE ဆို​တာ Microsoft Certified Systems Engineer ကိုြေ​ပာ​တာ။
အိုင်တီေ​လာ​က​မှာ အြ​မ​င့်​ဆုံး​အသိ​အမှ​တ်ြ​ပု လက်မှ​တ်နှစ်ခုြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ်။ ဒီ​လက်မှတ်ရ​ဖို့​​အတွ​က် လေ့​လာ​သင်ယူ​ရ​မ​ယ့် courseေ​တွ​ကို Microsoft ကု​မ္ပဏီ​က​ပဲြ​ပ​ဋ္ဌာ​န်း​တ​ယ်။ မိုက်ခ​ရိုေ​ဆာ့ဖ်က​ပဲ စာေ​မး​ပွဲေ​တွ​စစ်ေ​ဆးြ​ပီး အသိ​အမှ​တ်ြ​ပု​လက်မှ​တ်ေ​တွ​ကို ထု​တ်ေ​ပး​ခဲ့​ တ​ယ်။
ဒီ​စာေ​မး​ပွဲနှစ်မျိုး​စလုံး​မှာ Windows Operating System ကို ထိ​န်းချု​ပ်နိုင်ဖို့​ သို့​​မ​ဟု​တ် administration လု​ပ်နိုင်ဖို့​ အသိ​ပညာ၊ ဗ​ဟု​သုတ ဘယ်ေ​လာက်ရှိ​သလဲ ဆို​တာ​ကို စ​မ်း​သပ် စစ်ဆေး​တာြ​ဖစ်ပါ​တ​ယ်။ ဒါေြ​ကာ​င့် လက်မှ​တ်နှစ်ခု​မှာ ဘယ်ဟာ​ကို​ယူ​လို့​ ဘယ်မူ​လိုက်ရ မှာ​လဲဆို​ပြီး လူ​င​ယ်ေ​တွ ဇေ​ဝ​ဇဝါြ​ဖ​စ်ြ​က​တာများ​တ​ယ်။
MCSA နဲ့​ MCSE course နှစ်ခု​မှာ သူ​တို့​​ရဲ့​​အေ​န အထား​အရ ကွဲြ​ပားချ​က်ေ​လးေ​တွ​ရှိ​ပါ​တ​ယ်။ ဒါ​ကို သိ​ထား​ရ​င် ဆ​င်ြ​ခ​င်နိုင်မယ်ထင်ပါ​တ​ယ်။
ခု​မှ​စ​တ​င်ြ​ပီးေ​လ့​လာ​လိုက်စား​သူ starterေ​တွ အတွ​က် မိုက်ခ​ရိုေ​ဆာ့ဖ်ကေ​တာ့ MCSE ကို​ယူ​ရ​င် အန​ည်း​ဆုံး တ​စ်နှ​စ်ေ​လာက်အေ​တွ့​​အြ​ကုံ​ယူ​ရ​မ​ယ်။ စာေ​တွ​ဖတ်ရ​မ​ယ်။ MCSA ဆို​ရ​င်ေ​တာ့ ၆ လ​ကေ​န တ​စ်နှစ်အ​တွ​င်းြ​ကိုး​စား​သေ​လာ​က်ေ​အာ​င်ြ​မ​င်နို​င် တယ်လို့​​ဆို​ထား​တ​ယ်။ ဆို​လိုချင်တာ​က ယ​ခင်အေ​တွ့​ အြ​ကုံ လုံး​ဝ မ​ရှိ​သူေ​တွ​အတွ​က် MCSA ယူ​သူေ​တွ​က ၄ လ​ကေ​န ၆ လ၊ MCSE အတွက်ဆို​ရ​င် ၈ လ​ကေ​န ၁၂ လလော​က်ြ​ကာေ​အာ​င်ေ​လ့​လာ​ရ​မ​ယ်။
MCSA လ​မ်းေြ​ကာ​င်း​ကို​လိုက်ရ​င် အရင်အေ​တွ့​ အြ​ကုံေ​တွ​မ​လို​ဘူး။ အချိန်က​လ​ည်း ထက်ဝ​က် လော​က် သက်သာ​သွား​နိုင်တ​ယ်။ြ​ကိုး​စား​ရ​င် ၄ လ​ကေ​န ၆ လ​အတွ​င်းြ​ပီး​သွား​နိုင်တ​ယ်။ MCSE လ​မ်းေြ​ကာ​င်း​ကို​လိုက်ရ​င်ေ​တာ့ ၈ လ​ကေ​န ၁၂ လေ​လာက်အ​ထိြ​ကာနိုင် တ​ယ်။
MCSE သင်ယူချိ​န် သို့​​မ​ဟု​တ် သင်တ​န်းချိ​န်ြ​ကာ​ရ​တာ​က သူ့​​မှာြ​ပ​ဋ္ဌာ​န်း​ထား​တဲ့ သ​င်​ရိုး​ညွှ​န်း​တ​မ်းေ​တွ​က ပိုြ​ပီးကျ​ယ်ြ​ပ​န့်​​တ​ယ်။ ကျ​ယ်ြ​ပ​န့်​​သေ​လာ​က် အကုန်လုံး​လို​က်ြ​ပီးေ​လ့​လာ​စရာ​လို​သလား​ဆိုေ​တာ့ လ​ည်း မ​ဟုတ်ဘူး​လို့ြေ​ပာ​ရ​မ​ယ်။ အချို့​​အပို​င်းေ​တွ မှာ လ​က် တွေ့​ ​နဲ့​ က​င်း​ကွာေ​န​တာေ​တွ​လ​ည်း​ရှိ​တ​ယ်။
မိုက်ခ​ရိုေ​ဆာ့ဖ်ကေ​တာ့ MCSEေ​အာင်ထား​ရ​င် အလုပ်အ​ကိုင်ရှာ​ရ​တာ​လ​ည်း​လွယ်တ​ယ်။ Server လုပ်င​န်းြ​ကီးေ​တွ​မှာ အလုပ်ရနိုင် တယ်လို့​ ဆို​ထား တ​ယ်။ MCSA ကေ​တာ့ ကွန်ပျူ​တာ​ပို​င်း​မှာ maintaining, troubleshooting နဲ့​ networking ပို​င်းေ​လာက်ကို​ပဲ အလေး​ထား​တာေြ​ကာ​င့် ပို​လွယ်တ​ယ် လို့​​လ​ည်ြးေ​ပာနိုင်တ​ယ်။
MCSA လက်မှတ်က design skillေ​တွ​ကို သိ​ပ်ြ​ပီးေ​တာ့ အေ​လး​အနက်ထား​စရာ​မ​လို​ဘူး။ MCSE မှာေ​တာ့ လို​တ​ယ်။
ဒါေြ​ကာ​င့် course ကိုေ​ရွးချ​ယ်ြ​က​ရာ​မှာ လူ​င​ယ်ေ​တွ​က တ​က​ယ့်​လို​အပ်ချ​က်၊ အသုံး​ဝင်ချက်ကို သိြ​က တာ​မ​ဟုတ်ဘူး၊ ဘယ်ဟာ ပေါ်ပြူ​လာ​ အြ​ဖစ်ဆုံး​လဲဆို တဲ့​အေ​ပါ်​ကို​မူ​တ​ည်ြ​ပီးေ​ရွးချယ်တ​တ်​ကြ​တာများတ​ယ်။ MCSE သမားေ​တွ​က အေ​သး​စိတ်ကျကျေ​လ့​လာ​လိုက်စားြ​ပီး​မှြေ​ဖ​ဆိုြ​က​ရေ​ပ​မ​ယ့်၊ MCSA ကေ​တာ့ လ​က်ေ​တွ့​​ပို​ဆ​န်ြ​ပီး ပိုြေ​ဖနို​င်ေ​အာ​င် စီ​စ​ဥ်ထား​တာများ​တ​ယ်။
လက်ရှိ​ကေ​တာ့ MCSE ရထား​သူေ​တွ​ကို လုပ်င​န်း​ခွ​င်ေ​တွ​က​လ​ည်း အထ​င်ြ​ကီးေ​လ့​ရှိြ​ပီး၊ အလုပ် ခန့်​​ရာ​မှာ​လ​ည်း မျ​က်နှာ​သာေ​ပးြ​က​တယ်။ လ​စာ​လ​ည်းေ​ကာ​င်းြ​က​တ​ယ်။ ဒါေ​ပ​မ​ယ့် network OS အေြ​ကာ​င်း serverေ​တွ​အေြ​ကာ​င်းေ​တာ့ေ​ကာ​င်းေ​ကာ​င်း​သိ​ရ​မ​ယ်။
MCSA နဲ့​ MCSE နှစ်ခု​ဟာ လ​က်ေ​တွ့​​မ​ပါ​ရ​င် မ​တတ်ဘူး၊ လ​က်ေ​တွ့​​လု​ပ်ြ​က​ည့်​မှ​သာ သိနို​င်ြ​ပီး နောင်တစ်ချိန်အကျိုး​ရှိနိုင်မ​ယ့် န​ည်း​ပညာ အမျိုး​အစားြ​ဖစ်တယ်ဆို​တာ သိ​ထား​ရ​မ​ယ်။ ဘာ​မ​ဆို လ​က်ေ​တွ့​မ​ပါ၊ လ​က်ေ​တွ့​မ​သိ​ရင်လ​ည်း လုပ်င​န်း​ခွင်မှာ အဆ​င်ြေ​ပ​ဖို့​​မ​လွယ်ဘူး။
လက်မှ​တ် (certificate) ဆို​တာ ငါ​ဘာ​ဆို​တာ​ကိုြေ​ပာြ​ပ​ထား​တဲ့ သေ​က​င်္တ​တစ်ခု​ပါ။ ကျွ​မ်းကျင် သည်ြ​ဖ​စ်ေ​စ မကျွ​မ်းကျင်သ​ည်ြ​ဖ​စ်စေ သတ်မှတ်ချ​က် တစ်ခု​ခု​ကို သူ​ပိုင်ဆိုင်ထား​လိုက်ပါြ​ပီ။ လူ​တစ်ေ​ယာ​က်ဟာ သူ​ဘာ​ပါ​ဆို​တာ​ကို သူ့​​ကို​ယ်ေ​ရး CV form မှာေ​ဖာ်ြ​ပ​လို့​​ရ​ပါ​တ​ယ်။ ဘယ်လက်မှတ်ကို​င်ေ​ဆာင်ထားတ​ယ်။ ငါ​ဘာ​ဆို​တာ​ကိုေ​ပါ့။ ဒါေ​ပ​မ​ယ့် ကျွ​မ်းကျင်မှု ကိုေ​တာ့ CV formေ​ပါ်​မှာေ​ဖာ်ြ​ပ​ထား​တဲ့​အတို​င်း ဟုတ်မ​ဟု​တ် မ​သိနိုင်ဘူး။ ကျွ​မ်းကျင်တယ်ဆို​တာ လ​က်ေ​တွ့​​လုပ်ခို​င်း​မှ​သာ သိနိုင်တ​ယ်။
Microsoft ဆို​တာ က​မ္ဘာ့​ထိပ်တ​န်း​အဆ​င့်​ရှိ​တဲ့ ကု​မ္ပဏီြ​ကီး​တစ်ခု​ပါ။ က​မ္ဘာ​က​လ​ည်း အသိ​အမှ​တ် ပြုြ​ကရ​တ​ယ်။ MCSA သို့​​မ​ဟု​တ် MCSE လက်မှ​တ် ကိုင်ထား​တယ်ဆို​တာ​လ​ည်း အထ​င်ြ​ကီးေ​လး​စားစရာေ​ကာ​င်း​ပါ​တ​ယ်။ လက်မှတ်ဆို​တာ အဆ​င့်​အတ​န်း​ပါ။ ကျွ​မ်း ကျင်မှုေ​တာ့ မ​ဟုတ်ပါ​ဘူး။ ဒါေြ​ကာ​င့်​လ​ည်း သူ​တို့​နိုင်ငံေ​တွ​မှာ လုပ်င​န်း​ခွင်ကို​လ​က်ေ​တွ့​​ဆ​င်း​ခို​င်းြ​ပီး ရ​လဒ်ကိုြ​က​ည့်​ကာ ပို​င်း ဖြတ်တာေ​တွ​လ​ည်းေ​ခတ်စား​လာြ​ပီ။
အလုပ်လာေ​လျှာက်ရ​င် ရထား​တဲ့​လက်မှ​တ်ေ​တွေ​တာ​င်း​မြ​က​ည့်​ရုံ​သာ​မ​ဟုတ်ဘူး၊ ကို​င်ေ​တာ​င် မ​ကြ​ည့်​ဘူး​လို့​ သူ​ငယ်ချ​င်း​တ​စ် ယောက်က ကို​ယ်ေ​တွ့ြေ​ပာြ​ပ​ဖူး​ပါ​တ​ယ်။ သူ​က
‘‘ငါ့ကို အင်တာေ​ခ်ါဗျူးေ​တာ့ လ​န့်​​လိုက်တာ၊ အဆင်မှေြ​ပ​ပါ့​မ​လား​လို့​။ ငါ​က MCSE လို့ေြ​ပာ​လို​က် တော့ အဲ​ဒီ​တ​ရုတ်က နှာေ​ခါ​င်း​ရှုံ့​​တ​ယ်။ြ​ပီးေ​တာ့ ငါ့​အလုပ်မှာ ဒါေ​တွ​ကို​လုပ်ရ​မ​ယ်၊ မ​င်း ဘာ​လု​ပ် နိုင်သလဲ​လို့ေ​မး​တ​ယ်။ ငါ​က web site တစ်ခု​ကိုေ​ကာ​င်းေ​ကာ​င်းေ​ရး​တတ်တယ်လို့ြေ​ပာ​လိုက်တယ်။ တ​ရု​တ်က ငါ့ကို ကွန်ပျူ​တာ လ​က်ညှိုး​ထိုးြ​ပြ​ပီး ဟို​မှာ​သွားေ​ရး​လို့ေြ​ပာ​တ​ယ်။ြ​ပီး​ရ​င် သူ့​​ကိုေ​ခါ်​လိုက်တဲ့။ ငါ လ​ည်း ထ​မ​င်းေ​တာ​င် ထ​မ​စားြ​ဖစ်ဘူး။ြ​ပီးေ​တာ့ သူ့​​ကိုေ​ခါ်ြ​ပ​လိုက်တ​ယ်။ မ​င်း​ကို ၃၀၀၀ ပေးမယ်လို့ပြောပြီး ချက်ချင်းခ​န့်​​လိုက်တ​ယ်။ ခု​ထိ ငါ​ရထား​တဲ့ ဘွဲ့ေ​တွ လက်မှ​တ်ေ​တွ တစ်ခါ​မှေ​ခါ်​မစ​စ်ေ​သး​ဘူး’’ လို့​ စင်ကာ​ပူ​ကိုေ​ရာ​က်ေ​န​တဲ့ သူ​ငယ်ချ​င်း​တ​စ်ယောက်ရဲ့​ ကို​ယ်ေ​တွ့​​စကား​ကိုေ​လ့​လာြ​က​ည့်​ရ​င် ဘာ​အေ​ရးြ​ကီး​သလဲ​ဆို​တာ သေ​ဘာေ​ပါက်လိ​မ့်​မယ်ထင်ပါ​တ​ယ်။
Comment by virus on January 10, 2012 at 11:48
Comment by oonphyo on December 20, 2011 at 15:36
Comment by chocolate on September 3, 2011 at 20:12
Comment by Kenneth Lu on July 7, 2011 at 10:20
thank u so much! i think only certificates can decide we can getajob or not. But now it's clear............:)
Comment by Pyae Pyae Thet Win on July 6, 2011 at 9:41
what about cisco exams ?
Comment by Zawoo on July 4, 2011 at 9:40
thank u very much for your knowledge sharing
Comment by thawzinphyo on July 1, 2011 at 14:00